चीनमा तातो पानीको रहस्य ! - Jhilko
चीनमा तातो पानीको रहस्य !
काठमाडौं । चीनका मानिसले चीसो पानी भन्दा तातो पानीको रुचि राख्छन् । बाह्रै महिना जाडो होस् या गर्मी सबै बासिन्दाले तातो पानीलाई नै प्राथमिकता देख्छन् । २० औं शताब्दीको सुरुदेखि नै त्यहाँ Public Health Campaign (सामाजिक स्वास्थ्य अभियानहरुमा तातो पानी पिउनको लागि प्रोत्साहित गर्दै आइयो ।
१९३० को दशकको राष्ट्रवादी सरकारले आफ्नो शक्तिलाई सुदृढीकरण गर्दै थियो, New Life Movement भनिने नागरिक अभियान संचालन ग¥यो । अरु चीजहरुको साथै मानिसलाई न्यानो मनतातो पानी पिउन प्रोत्साहित ग¥यो ।
राष्ट्रवादीले सरकार गुमाएपछि पनि कम्युनिस्ट सरकारले तातो पानीको प्राथमिकतालाई जोगाई नै राख्यो । १९५२ देखि कम्युनिस्ट सरकारले धेरै सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानहरु सुरु ग¥यो र मानिसलाई तातो पानी पिउन प्रोत्साहित गर्दै गयो । त्यही परम्परा र संस्कार अहिलेको पुस्तामा पनि निरन्तर आइरहेको छ ।
चिनियाँले तातो पानी पिउन रुचाउनुको एउटा कारण आफ्नो शरीरलाई न्यानो राखिराख्नु हो । यस अभ्यासले शरीरका ब्याक्टेरियाहरुलाई मार्न मद्दत गर्दछ भन्ने विश्वास छ ।
न्यानो/तातो पानी पिउने वानि यति लामो समयसम्म रहिरहनुको कारण परम्परागत चिनियाँ औषधी Traditional Chinese Medicine हो ।
२००० वर्ष पहिले लेखिएको चिनियाँ चिकित्सा Huangdi Neijing मा तातो पानीलाई स्वास्थ्यको एक प्रभावकारी नियमको रुपमा सिफारिस गरिएको छ । उक्त चिनियाँ इतिहासमा तातो पानी पिउनाले शरीरको हरेक अंगहरुलाई राम्रोसँग कार्य गर्न मद्दत पु¥याउँने जनाइएको छ ।
यस्तै विभिन्न Traditional Chinese Medicine (TCM) मा तातो पानीले पिउनाले पाचन प्रक्रियाका साथै पौष्टिकतामा पनि मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
अहिले विश्वभर फैलिरहेको नोबेल कोरोना भाइरस चीनको वुहानमा पहिलो पटक देखिएको थियो । यस्तै परस्परागत मान्यतालाई उपयोग गर्ने संस्कारले धन्नै चीनमा ९० हजारको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित हुँदा समेत मानवीय क्षतिलाई न्यून राख्न सफल भयो। आज संसारका २१० देशमा भाइरस फैलिरहेको छ । यसको निर्मुल गर्ने औषधी अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकले पत्ता लगाउन कोसिश गरिरहेका छन तर सफलता हात लाग्न सकिरहेका छैनन् । तातो पानी बारम्बार पिउनु र पटक पटक हात धुनु आजका संसारका मेडिकल चिकित्सकहरुले समेत सुझाइरहेको छन जुन चीनले सदियौंदेखि गर्दै आइरहेको थियो ।
किन सजिलो छैन कोरोनाको उत्पत्ति पत्ता लगाउन?
आफ्नै हेलिकोप्टरलाई मिसाएल लागेको भारतद्वारा स्वीकार
गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानसँग काश्मिर बिषयमा भएको द्वन्द्वका क्रममा भारतीय वायु सेनाले...
बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई पुनः तीन दिनको म्याद थप
थपिएको म्याद समाप्त भएपछि सिद्धबाबाको मिसिल अदालतमा बुझाइने